Agụmakwụkwọ Ansys Workbench 2020 - Geofumadas
Ọzọkwa, AulaGEO na -eweta onyinye ọhụrụ maka ọzụzụ na Ansys Workbench 2020 R1 - Nhazi na ịme anwansị. N'ime usoro mmụta a, ị ga -amụta isi ihe Ansys Workbench. Malite na mmeghe, anyị ga -enyocha ngwa ngwa nke nyocha nke a ga -ekpuchi n'oge agụmakwụkwọ niile.
Anyị ga -eleba anya na ngwanrọ ngwanrọ, na -eduga n'ọtụtụ nzọụkwụ na -amalite site na data injinịa, wee jiometrị (Space Claim) wee mezie (Ansys Mechanical). A ga -akụzi ụdị nyocha dị iche iche, gụnyere usoro static, modal, ugboro nkwekọrita, ọnọdụ ọnọdụ kwụ otu ebe, igwe na -agafe agafe na nyocha ike ọgwụgwụ.
Kedu ihe ụmụ akwụkwọ ga-amụta na nkuzi gị?
Kedu ndị bụ ụmụ akwụkwọ ị lekwasịrị anya?
Ndị na -eme egwuregwu 3D
ndị injinia obodo
Ndị nrụpụta 3d
Usoro - Ndụ Ndụ Ansys ọmụmụ Usoro Nhazi Mechanical
Previous Post«Previous NSGIC na-ekwuputa ndị otu ọhụrụ
Next Post Agụmakwụkwọ Sayensị - Mụta na Python, Plotly na mpempe akwụkwọNext »